Soo -saareyaasha shaaha cagaaran - Shiinaha Warshadda shaaha cagaaran & alaab -qeybiyeyaasha
Shaaha Gardenia ee shaaha cagaaran ee Shiinaha
Shaaha Gardenia waa warshad ay iska leeyihiin qoyska Rubiaceae iyo noocyada beerta. Shaah Gardenia waxay leedahay saamayn ah in la nadiifiyo kulaylka iyo sumoobo, waxayna ku habboon tahay dadka leh kulayl weyn, dadka leh dastuurrada diirrani waxay kor u qaadi doonaan daciifnimada jidheed. Shaaha Gardenia waa nooc ka mid ah shaaha caafimaadka dawooyinka ee dhaqanka Shiinaha, kaas oo lagu helo qalajinta miraha bisil ee beeriya. Waxay ku kordhin kartaa jidhka bini'aadamka nafaqo hodan ah, kulaylka iska fogeeya oo sumooba, waxay kor u qaadaa iska caabbinta cudurrada jirka, waxayna faa'iido weyn u tahay dayactirka caafimaadka aadanaha.
Shaaha Cagaaran Alpine ee Shiinaha Yangxian Xueya Shaaha Cagaaran
Yangxian Xueya, oo ah takhasus u leh Magaalada Yixing, Gobolka Jiangsu, waa tilmaam juquraafi ahaan wax soo saarka beeraha qaranka. Barafka Barafka ee Yangxian waxaa laga soo saaraa Aagga Muuqaalka Harada Lake Taihu ee Qaranka, magaceeda shaahana wuxuu ka soo jeedaa maansada Su Shi ee “Barafka Barafka waxaan rabaa Yangxian”. Burooyinka Yangxianxue waa kuwo dhagan oo toosan, midabkuna waa cagaar sumurud leh. Uduggu waa xarrago, dhadhanku waa qafiif, maraquna waa cad yahay oo dhalaalayaa, caleemaha guntiisuna waa mid jilicsan oo dhammaystiran.
Xin Yang Mao Jian Shaaha Cagaaran ee Shiinaha
Aagga Shaaha Xinyang waa aag shaah oo qadiimi ah oo ku taal Shiinaha oo leh taariikh dheer oo wax soo saarka shaaha. Waxaa guud ahaan la rumeysan yahay in Xinyang uu hodan ku ahaa shaah xilligii boqortooyadii Tang intii lagu jiray boqortooyadii bariga Zhou, oo bilaabatay in ka badan 2,000 oo sano ka hor. Xinyang Maojian waxaa laga soo saaraa buuraha koonfur -galbeed ee Xinyang City, Gobolka Henan, sida: Cheyun Mountain, Lianyun Mountain, Jiyun Mountain, Tianyun Mountain, Yunwu Mountain, Bailongtan, Heilongtan, Hejiazhai, iwm. sidoo kale waa mid ka mid ah tobanka ugu sarreeya shaaha caanka ah ee Shiinaha. Shaaha Xinyang Maojian, oo ah shaah dhaqameed, ayaa loogu magac daray "Maojian" sababta oo ah cidhiidhkeeda, wareegsan oo toosan, oo ay ka buuxaan timo cad. Waxaa sidoo kale loogu magac daray "Xinyang Maojian" maxaa yeelay waxaa lagu soo saaray Xinyang.
Tiantai Mountain Yunwu Shaaha Buurta Dhirta Dabiiciga ah
Shaaha Tiantai Yunwu waxaa laga soo saaraa meelaha ugu sarreeya Buurta Tiantai ee Gobolka Zhejiang. Dusha ugu sarreysa ee Huading ayaa ugu fiican, sidaa darteed waxaa sidoo kale loogu yeeraa Huading Yunwu iyo shaaha Huading. "Fog iyo taageero sharaf leh Caixia, Guiyun Dongkou Ming Qijia". Huading Yunwu Shaaha ayaa leh tayo gaar ahaaneed waxaana loo yaqaanaa mid ka mid ah shaaha caanka ah. Macaamiishu waxay u yimaadaan inay bixiyaan koob shaah Huading Yunwu ah oo leh dhadhan aad u udgoon iyo soo jiidashada Qingyuan, taas oo hubaal ka dhigaysa dadka inay dareemaan nasasho iyo daal.
Daanyeerka Silver Songyang waxaa loogu magac daray xargaha duuban, oo u eg baalasha daanyeerka iyo midabka lacagta ah. Shaaha Daanyeerka Silver Songyang waa mid ka mid ah shaah caan ah oo dhowaan laga abuuray Gobolka Zhejiang. Waxaa laga soo saaray aagga buuraleyda ah ee koonfurta Zhejiang ee aagga bannaanbaxyada deegaanka dabiiciga ah, taxanaha shaaha ee caanka ah sida Yinhou Shanlan, Yinhou Dragon Sword, Yinhou White Tea, Yinhou Fragrant Tea, iwm, waa tayo aad u wanaagsan. Cabbitaanku waa nasasho iyo nasasho, oo leh dhadhan aan dhammaad lahayn Waxaa loo yaqaan "Qasnadaha Shaaha". “.
Shaaha Cagaaran ee Alpine ee Shiinaha Shucheng XiaoLanHua Shaaha
Shucheng orchid waa shaah caan ku ah taariikhda, oo la abuuray dabayaaqadii Ming iyo horraantii Qing. Qaabku waa dhuuban yahay oo wuxuu u laaban yahay qaab jillaab u eg, burooyinkeeda iyo caleemihiisu waxay samaystaan ​​ubaxyo, midabkuna waa cagaar sumurud ah, xagga hore ee fiiqanna waa la muujiyaa; udugga gudaha waa orchid oo kale, mid cusub oo raagaya, dhadhanku waa macaan yahay, maraquna waa jilicsan yahay oo cagaar yahay, caleemaha guntiisuna waa xitaa huruud. Cagaar, waxay ka tirsan tahay qaybta shaaha cagaaran.
Jumlada super hoose qiimaha ugu sarreeya miisaanka luminta buurta cagaaran shaah cagaaran
“Saddex Koob oo Udgoon leh” ayaa ka yimid xulashada shaah cagaaran oo la shiilay oo tayo sare leh oo ka yimid Beerta Shaaha Yangping ee Buurta Taishun. Markii hore waxaa loogu yeeri jiray “Taishun High Green”, laakiin xulashada agabkeeda iyo shuruudaha wax -soo -saarkeeda ayaa aad u adag, iyo farsamaynta wax -soo -saarka ayaa sidoo kale si aad ah loo hagaajiyay loona soo saaray. Habka wax soo saarkiisa gaarka ah. Khubarada shaaha ayaa ku faallooday inay tahay "maraq cad oo leh caleemo cagaar ah, udgoon iyo jaale, soo -noqnoqosho soo noqnoqota, saddex koob oo udgoon raagay", ka dibna si rasmi ah loogu magacaabay "saddex koob oo udgoon."
Maegang Huibai dukaanka shaaha ee Shiinaha
Shaaha waxaa la aasaasay xilligii Tongzhi ee Boqortooyadii Qing waxaana lagu taxay abaalmarin. Dabeecadda ayaa ah inay u muuqato mid wareegsan oo aan wareegsanayn, ubaxyada duuban ayaa duuban, si adag loo guntaday oo nadiif ah, oo leh baraf cagaaran emerald; maraqu waa huruud iyo dhalaal, caleemaha guntiisu waa huruud dhalaalaya, uduggu waa xoog badan yahay, dhadhankuna waa mid fudud. Waa mid ka mid ah khasnadaha shaaha cagaaran ee wareegsan ee Shiinaha. Waqtiyadii hore, shaaha laga soo saaray Yuezhou waxaa si wadajir ah loogu yeeri jiray shaaha Yuezhou. Shengzhou waxay ahayd aagga soosaarka shaaha Yuezhou tan iyo wakhtiyadii hore. Boqortooyadii Han ee Galbeedka, Shengzhou waxaa loogu yeeri jiray Yanxian, iyo meelaha sare ee Wabiga Cao'e ee Gobolka Shengxian waxaa loogu yeeri jiray Yanxi. Sidaa darteed, shaaha laga soo saaray Shengzhou ayaa sidoo kale loo yaqaan Yanxi shaah leh tayo aad u fiican.
Meng Ding Gan Lu Shaaha Cagaaran ee Shiinaha
Shaaha Mengshan waxaa inta badan lagu soo saaraa buurta Mengshan dusheeda, sidaa darteed waxaa loogu yeeraa “shaaha Mengding”. Bartamaha Wabiga Yangtze, shaah wuxuu saaran yahay buurta Mengshan dusheeda. Shaaha Mengding waxaa laga soo saaraa Mengshan, oo ah buur caan ah oo ku taal Gobolka Sichuan iyo Ya'an. Goobta Wu Lizhen, oo ah aasaasihii Ganlu ee Han Han ee Qingfeng, ayaa gacanta ku beeray toddoba shaah oo aan dhimanayn Buurta Mengding, Sichuan. Mengding Ganlu waa shaaha caanka ah ee ugu da'da weyn dalka Shiinaha.
Lushan Yunwu Shaaha waa shaah caan ah oo caan ku ah dhalashada Han. Waa mid ka mid ah taxanaha shaaha ee caanka ah ee Shiinaha waxaana iska leh nooc ka mid ah shaaha cagaaran. Waxay markii hore ahayd shaah duurjoog ah. Goor dambe, wadaadkii caanka ahaa ee Macbadka Donglin Huiyuan wuxuu shaah duurjoog ah u beddelay shaah guriga lagu beero. Waxay ka bilaabatay Xukunkii Han waxaana lagu taxay "shaaha cashuurta" ee Boqortooyadii Song. Waxaa loogu magac daray Lushan, oo laga soo saaro Magaalada Jiujiang, Gobolka Jiangxi, Shiinaha.